မြန်မာ - တရုတ် ဝင်၊ ထွက်ဂိတ်များ၌ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ နှစ်နိုင်ငံ လူဝင်လူထွက် စိစစ်မှုများ အဆင?? - Yangon Media Group
မြန်မာ – တရုတ် ဝင်၊ ထွက်ဂိတ်များ၌ တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ နှစ်နိုင်ငံ လူဝင်လူထွက် စိစစ်မှုများ အဆင??
မူဆယ်၊ ဇွန် ၃
မြန်မာ-တရုတ်နှစ်နိုင်ငံ ဝင်/ထွက် စစ်ဆေးရေးဂိတ်များတွင် တရုတ်ပြည်နယ်စပ် ကာကွယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန [(လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ)(ရွှေလီ)]နှင့်တရုတ်နိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန(ရွှေလီ)တို့က တင်းကျပ်စွာ စစ်ဆေးမှုများအား မေ ၂၅ ရက်မှစတင်၍ ပြုလုပ်လာသောကြောင့် တရုတ်ပြည်ကြယ်ဂေါင်နှင့်ရွှေလီသို့ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)မူဆယ်မြို့မှ အခြေပြု၍ နေ့စဉ်သွားလာအလုပ်လုပ်နေကြသည့် မြန်မာအလုပ်သမားများ၊ ကုန်သည်များ၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ရောင်းဝယ်ဖောက် ကားနေသူများ၊ အဝယ်တော်များနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ အခက်အခဲနှင့်ရင်ဆိုင်နေကြရကြောင်းသိရသည်။
”နံနက် ၅ နာရီကစပြီး တန်းစီတာ ကိုယ့်အလှည့်က တော်တော်နဲ့မရောက်တဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ ဟိုဘက်ကမ်းမှာချက်စားဖို့ ယူသွားတဲ့ ဆန်၊ ဆီ၊ သရက်သီးတွေကို တရုတ်ကျန်းမာရေးဌာနက တား မြစ်ခဲ့တာကြောင့် မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာပြန်ထားခဲ့ရပါတယ်။ အခု နေ့လယ်လောက်မှာ ရောက်တာဆိုတော့ အချိန်တွေကုန်၊ အလုပ် တွေပျက်တာပေါ့။ နောက်ပြီး မိုးရွာထဲမှာ အမိုးအကာမရှိ စောင့် နေရတော့ ကလေးပါတဲ့သူတွေ အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေဆိုရင် ဒုက္ခရောက်တာပေါ့”ဟု မူဆယ်မြို့မှ ကိုကျော်ဇင်ဝေက ပြောကြားသည်။ ယခုအခါ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံနယ်စပ်ကာကွယ်စုံ စမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန(လူဝင်မှုကြီး ကြပ်ရေးဌာနခွဲ/ရွှေလီ)သည် နှစ်နိုင်ငံ ဝင်/ထွက်ဂိတ်များဖြစ်သည့် မူဆယ်မြို့ရှိ ဆင်ဖြူ၊ နန်းတော်နှင့် မန်ဝိန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များမှ ဖြတ်သန်းလာသည့် မြန်မာနိုင်ငံသားများအား လက်ချောင်းလက် ဗွေရယူခြင်း၊ မျက်နှာအား Scan ဖတ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ အမည်၊ မှတ်ပုံတင်အမှတ်စသည့် ကိုယ် ရေးအကျဉ်းရယူခြင်းတို့ကို စိစစ် မှတ်တမ်းယူပြီးမှသာ တရုတ်ပြည်အတွင်း ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုနေသည်။
”အရင်က လူတစ်ယောက်ကို စက္ကန့် ၃ဝ နဲ့စစ်ဆေးရာကနေ အခုတစ်မိနစ်ကျော်ခန့်ကြာလို့ ဝင်/ထွက်ပေါက်တွေမှာ လူတွေ ပိတ်ဆို့နေကြတာပါ။ မန်ဝိန်းဘက်မှာလည်း ကားသမားတွေကို လက် ဗွေယူတဲ့အတွက်ကြောင့် ကား တွေပါပိတ်ကုန်တယ်။ သူတို့ဘက်က အကြောင်းကြားလာတာတော့ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းမှုမှတ်တမ်းထပ်ဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်မှာလို့တော့ တရားဝင်အကြောင်းကြားလာပါတယ်။ ဒါပြီးရင် လွယ်ကျယ်တို့ နောက်နှစ်နိုင်ငံဝင်/ ထွက်ဂိတ် တွေမှာပါ လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်း ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားတာတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်း နယ်စပ်ဖြတ်သန်းမှု မှတ်တမ်းတွေတစ်ဆင့်မြှင့် တင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့တော့ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်”ဟု မူဆယ်မြို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာနခွဲ(၇)မှ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်စိန်က ပြောကြားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) တွင် နေထိုင်သူများက နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့်စာအုပ် BP (Border Pass) ဖြင့်လည်းကောင်း၊ တခြားဒေသမှ လာရောက်သူများက ယာယီနယ်စပ်ဖြတ်သန်းခွင့် လက်မှတ် TBP(Temporary Border Pass) ဖြင့်လည်းကောင်း မူဆယ်မြို့ရှိ နန်းတော်စစ်ဆေးရေးဂိတ်၊ ဆင်ဖြူစစ်ဆေးရေးဂိတ်နှင့် မန်ဝိန်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်သုံးခုမှ နေ့စဉ်ပျမ်းမျှလူဦးရေ ၁ဝဝဝဝ နှုန်း ဝင်/ထွက်နေကြသည်။ အဆိုပါ လူဝင်လူထွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှတ်တမ်းယူခြင်းကို တစ်လကြာပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ပြီး စမ်းသပ်ကာလပြီးစီးပါက မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်တစ်လျှောက်ရှိ နှစ်နိုင်ငံဝင်ထွက်ဂိတ်များတွင် တပ်ဆင်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ် ကြောင်းသိရှိရသည်။
မိုး အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းမှုကြာင့် ပျက်စီးသွားသော ရေကျော် တံတားအား ခုနစ်ရက်အတွင်း အပြီး တည်ဆေ
ပြည်သူတွေကိုချစ်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ ငြိမ်းချမ??
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နယ်မြေတွင် ခေတ်မီ ဘက်စုံကစားကွင်း ဖော်ဆောင်မည်